နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ - Shandong နယူး Ankai-Kitco Co. , Ltd မှ
အသစ် NC Ankai အဆိုပါ High-end CNC စက်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုကိုသွားမြင့်မားမာကျောမှု, ကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုအတွက်အထူးပြု, နိုင်ငံခြားနည်းပညာမိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုယူပါ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီရှုပ်ထွေးစက်စီးရီးထုတ်ကုန် milling နည်းပညာတောင်ကိုရီးယား HJM ကုမ္ပဏီသုံးခုတစ်လောကလုံး CNC ဒေါင်လိုက်တွင်ခုံ၏လက်ရှိတစ်ခုတည်းဗိုင်းလိပ်တံ, သုံးဝင်ရိုးချိတ်ဆက်ထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝထားဝယ်ယူ; လည်းကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူများကို၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ, ခုနစျပါးဝင်ရိုးချိတ်ဆက်လေးခုရှုပ်ထွေးစက်နှစ်ဆဗိုင်းလိပ်တံ milling High-grade ကို CNC ခုံရှိသည်။
မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုယူ: မော်တော်ယာဉ်, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ဆက်သွယ်ရေး, အိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, လေကြောင်း, စစ်တပ်, ဟာ့ဒ်ဝဲ, စက်မှုနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းများစက်မှုလုပ်ငန်းအမြောက်အမြားအတွက်မြင့်မားသောတိ, အသေးစားရှုပ်ထွေးအစိတ်အပိုင်းများအပြောင်းအလဲနဲ့, အများဆုံး clamping လှံတံကိုပစ္စည်းများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သော အချင်း 38mm, ပိုင်ရှင်မဲ့ထုတ်လုပ်မှု၏ 24 နာရီအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
စက်, ခေတ်မီကုန်ထုတ်လုပ်မှု (ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဝံ, ဘောလုံးကိုဝက်အူ, linear လမ်းညွှန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ထုတ်ကုန်တင်သွင်းနေကြသည်ကဲ့သို့) ဗိုင်းလိပ်တံ In-built နှင့် built-in high resolution ကတော့အန်ကုဒ်, စိတျအပိုငျး layout ကို, အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်, advanced, မြန်နှုန်းမြင့် CNC system ကိုချမှတ် နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်စံချိန်စံညွှန်းများကစက်ရုံစစ်ဆေးခြင်း, ထုတ်ကုန်နိုင်ငံတကာအဆင့်ချီတက်ရောက်ရှိနိုင်အောင်။
စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဖောက်သည်များနှင့်ဘုံဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့နည်းပညာမြင့်မားစမှတ်, အရည်အသွေးမြင့်သစ်ကို Ankai ၏ထာဝရလိုက်စားဖြစ်ပါသည်, Ankai လူသစ် "အရည်အသွေးပထမဦးဆုံးဝန်ဆောင်မှုအကျိုးရှိစွာ, ရှေ့ဆောင်ဝိညာဉ်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ဝိညာဉ်ကို။
CNC စက်ထုတ်ကုန် features တွေ:
1, မြင့်သောမာကျောမှု: တပြင်လုံးကိုစက်အနည်းငယ်ပိုလေးဖြစ်ပါသည်, စသည်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ် ချ. နံရံအထူ, အလမ်းညွှန်ရထားလမ်း၏သက်တမ်းအတွက်စက် tool ကို၏ကျောမှုနှင့်တိုးချဲ့ခံပြီးသောခွန်အားဖြစ်ကြ၏, မိုးသည်းထန်စွာဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အခြားစက် tools များထက်သာလွန်ဖြစ်ပါသည် , ဒါကြောင့်အပေါ်သံမဏိ, အလွိုင်းသံမဏိ, သံမဏိပစ္စည်းနှင့် processing အတွက်သိသာအားသာချက်ရှိပါတယ်။
2, မြင့်သောတည်ငြိမ်မှု: guide နှင့်ကျယ်လာပြီး span, သော့ခတ် device ကိုအညွှန်းထည့်နေပုံကိုပြီးနောက်အဓိကဘရိတ် / countershaft, workpiece ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
3. အဆိုပါ FANUC - ထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြောင်းလဲနေသော tool ကိုမော်တာနဲ့ feed ကိုမော်တာတစ်ခုအခန်းဆက် beta ကိုစီးရီးထက်သာလွန်သည်။
1) alpha စီးရီးအမြင့်ဆုံး FANUC မော်တာဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏တိ, စွမ်းဆောင်မှုနှင့်အသက်သည် beta ကိုစီးရီးထက် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ကြသည်။
2) beta ကိုစီးရီးမော်တာမရှိအပူချိန်ထောက်လှမ်းရှိသေး၏။ ဝန်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ကြီးမားသည်အခါမော်တာ၏အပူချိန်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးပွါးလာသောအခါအဆိုပါမော်တာများနှင့်စနစ်ပျက်စီးလိမ့်မည်။
3) ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဝင်ရိုး, alpha စီးရီးအမြင့်ဆုံးနှင့်အတူ (FANUC,) နှင့်ဗိုင်းလိပ်တံသုံးပြီး servo အသံချဲ့စက် transverse အသံချဲ့စက်စီးပွားရေး type ကိုအသံချဲ့စက်အဖြစ်အုပ်စုခွဲ, beta ကိုစီးရီးဖြစ်ပါတယ်, စျေးနှုန်းကတော့ alpha စီးရီးထက်နိမ့်ဖြစ်ပြီး, အဓိကဝင်ရိုး, transverse အသံချဲ့စက် , အရေးပါသောအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ရှိသမျှကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များအတွက်နှောင်းပိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်အစားထိုးအတွက် beta ကိုစီးရီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်သင့် alpha မော်တာ SM205 တပ်ဆင်ထားကြသည်။ အဆိုပါ alpha မော်တာ, တုံ့ပြန်ချက်၏တိကျ, အအန်ကုဒ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်လက်ရှိထောက်လှမ်း၏ torque ဟာ beta ကိုမော်တာထက်အများကြီးပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ကြသည်။
4, မြန်နှုန်းမြင့်, မြင့်မားသောတိနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်: အချိန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီ tool အတိုဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးတည်နေရာတစ်ချိန်တည်းမှာအောင်မြင်သည်နှင့်အရန်အချိန်လျှော့ချကြောင်းဒါကြောင့်အကောင်းဆုံး tool ကို layout ကို, မြန်နှုန်းမြင့်ဂဏန်းသင်္ချာစစ်ဆင်ရေးကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် အတိုဆုံး။
5, မြင့်သောဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ: အလွန်အပြောင်းအလဲနဲ့နယ်ပယ်ကျယ်လာပြီးရှုပ်ထွေးအစိတ်အပိုင်းများ၏ရှုပ်ထွေးသောစက်တွေ့ဆုံခဲ့ရာအများဆုံးစုစည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများ, Multi ဝင်ရိုးကြွယ်ဝတဲ့ tool တစ်ခုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်စံပါဝါကိရိယာများ, ။
6, အဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေးအာကာသ: အဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေးအာကာသ, ဓါးပြောင်းလဲပစ်ရန်လွယ်ကူသော, ဒေါင်လိုက်အောက်ဖက် tool ကအကောင်းဆုံး chip ကိုရနိုင်သည်။
7, မြင့်မားတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: ကပါဝါ tools တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အပြောင်းအလဲချည်ဘွေကြိတ်, ပါဝါဦးခေါင်း, VDI ရှုး, chip ကို remover, ရေနံခိုးအငွေ့စုဆောင်း, ဝါယာကြိုး extrusion ဘီးမြင့်မားဖိအားစုပ်စက်နှင့်အခြားတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်, လမ်းညွှန်ဘုရ်ှ Interchange တွေနဲ့သို့မဟုတ်မပါဘဲသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ် devices များ။